Ifanja Analavory: tohodrano manondraka tanimbary 2 050 ha | NewsMada
Ifanja Analavory: tohodrano manondraka tanimbary 2 050 ha
Mamboly vary indroa isan-taona ny tantsaha any Ifanja Analavory. Vao mainka hitombo ny vokatra amin’izao nahavitan’ny tohodrano izao.
Nanomboka ny taona 2016 ny fanarenana ny tohodrano any amin’ny lemak’Ifanja, distrika Analavory, faritra Itasy. Ahitana toerana roa, ny any atsimo, ny kaominina Anosibe Ifanja ary ny any Ifanja Avaratra, misy ny kaominina Sarobaratra Ifanja. Mamokatra vary ny any an-toerana, ahitana lemaka maherin’ny 2 050 ha ary afaka mamboly indroa isan-taona ny tantsaha. Miisa 10 ny tohodrano vita ka narenina ny fito ary vaovao ny telo. Anisan’izany ny any Antaboaka, kaominina Sarobaratra, ka narenina ny lakandrano mirefy 6 km, nodiovina ny 15 km, ary mirefy 17 km ny renirano nodiovina, nesorina fasika (i Kotombolo sy Ibizy). Miisa 11 ny lakandrano karazana tetezana (ponceaux) namboarina sy narenina. Mirefy 800 m ny vahilava namboarina, nisy lalan-tany narenina koa, miampy toby fitahirizana masomboly (BCS) natsangana any Ifanja. Nintentina 101 tapitrisa Ar ny asa nananganana azy, avy amin’ny Fandaharanasa BVPI/PHRD tanterahin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana. Azo itahirizana masomboly 100 t ity toby ity, hahatsara ny fambolen’ny tantsaha mpikambana.
Niakatra 5t/ha ny voka-bary
Nambaran’ny filohan’ny Fikambananan’ny mpampiasa rano, Rafanomezantsoa, fa efa nahitam-bokany sahady ity fanatsarana fotodrafitrasa ity satria nitombo avo roa heny, niakatra ho 5t/ha, ny voka-bary. Noho ny hatsaran’ny fikorianan’ny rano sy ny lakandrano, afaka mamboly vary indroa isan-taona na manao voly avotra koa ny tantsaha.
Misy koa ny fandaharanasa Formaprod, manohana ny tantsaha any amin’ity kaominina roa ity. Nizarana fitaovam-pamokarana, masomboly katsaka iray taonina, zana-kisoa sy akoho miisa 2 500 ho an’ny fikambanam-behivavy tantsaha.
Tsiahivina fa tanjona ny hahavitan-tena amin’ny vary eto Madagasikara amin’ny taona 2020.